Shabaab oo sheegtay in ay la wareegeen Deegaanka Ceel-Wareegoow | Baydhabo Online
Shabaab oo sheegtay in ay la wareegeen Deegaanka Ceel-Wareegoow
Wararka inaga soo gaaraya Deegaanka Ceel Wareegow oo ku yaalla Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan Dagaal khasaare geystay in uu xalay ka dhacay halkaasi.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Dagaalyahano ka tirsan Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin Ciidanka Dowladda Federaalka ay ku lahaayeen Deegaanka Ceel Wareegow, sida ay Risaala u sheegeen Dadka Deegaanka.
Wariyaha Risaala ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa soo sheegaya Dagaalkan in uu geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac, inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah.
Al-shabab war ay ku soo qoreen Baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen in Deegaanka Ceel Wareegow ay Dagaal kula wareegeen, inkastoo saraakiisha Ciidanka Dowladda ee Gobolka Shabeelaha Hoose aysan weli arintaasi.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in ay duqeyn xalay u geysteen Saldhigyada ciidanka AMISOM ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose.